अदभूत स्मरण शक्तिका विजय शाही विवेकानन्द बन्न सक्छन् ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/अदभूत स्मरण शक्तिका विजय शाही विवेकानन्द बन्न सक्छन् ?
अहिले विजय शाहीको चौतर्फी चर्चा रहेछ, यसबारे प्रायःजसोले आश्चर्य व्यक्त गरेको देखियो भने कतिपयले अविश्वास गरेको पनि देखियो । के ५–७ मिनेटमा हजार बाह्र सय पृष्ठको पुस्तक पढ्न सम्भव छ ? यसबारे स्वामी विवेकानन्दको चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । स्वामी विवेकानन्द पश्चिमी देशहरुको भ्रमण गर्ने क्रममा जर्मन पुगेका थिए, जहाँ विवेकानन्द त्यो बेलाका विश्वविख्यात दार्शनिक तथा सुप्रसिद्ध लेखक ‘पाल ज्याकब ड्युसन’ का अतिथि थिए ।
चेतनाको प्रयोग त झन् मस्तिष्कको प्रयोगभन्दा निकै शक्तिशाली प्रयोग हो । चेतन शक्तिको उच्चतम् प्रयोग गर्न सक्ने जुन क्षमता विवेकानन्द, बुद्ध, कृष्ण वा ओशोमा थियो अल्बर्ट आइन्सटाइनले कल्पना पनि गरेनन् । बुद्धत्व मस्तिष्कभन्दा परको स्थिति हो, मस्तिष्कको प्रयोगमा अहिलेसम्म रुमल्लिरहेको पश्चिमी सभ्यताले बुद्ध पुरुषहरुको यो देशमा अतिक्रमण गरिरहेको कटु यथार्थ दूर्भाग्यपूर्ण होइन र ? यो दोष कसको ? आफ्नो हिरा नचिन्ने, तर पराइको कोइला च्यापेर बस्ने कुबुद्धिबाट हामी कहिले मुक्त हुने ?canada nepal
थाइल्याण्डबाट काठमाडौं अवतरण गर्दै छ यो जहाज, आखिर किन आउंदै छ नेपाल ?